Mashandisiro Aunoita Attribution Kuongorora kweiyo Yakasimba Kushambadzira Insight | Martech Zone
China, Kurume 5, 2015 China, November 5, 2015 Douglas Karr
Kuwanda kwenzvimbo dzekubata dzaunosangana nadzo nevatengi - uye nzira dzavanosangana nadzo neako marangi - dzakaputika mumakore apfuura. Munguva yakapfuura, sarudzo dzaive nyore: iwe wakamhanya kushambadzira kushambadzira, kushambadzira kushambadzira, pamwe yakananga tsamba, kana kumwe kusanganisa. Nhasi kune kutsvaga, kuratidzwa pamhepo, zvemagariro midhiya, nhare, mablog, nzvimbo dzekubatanidza, uye runyorwa rwunoenderera mberi.
Nekuwanda kwevatengi kwekubata mapoinzi kwauyawo kwakawedzera kuongororwa maererano nekubudirira. Ndeupi kukosha chaiko kwedhora rakashandiswa mune chero svikiro? Ndeipi svikiro inokupa iwe yakanyanya kubha pamari yako? Ungaita sei kuti uwedzere kukanganisa kuenda kumberi?
Zvekare munguva yakapfuura, kuyerwa kwaive nyore: iwe wakamhanya kushambadza, uye ukaongorora mutsauko maererano neruzivo, traffic uye kutengesa. Nhasi, kushambadzira kwekushambadzira kunopa ruzivo rwekuti vangani vanhu vadzvanya pachishambadziro chako uye vauya kwaunoda kwaunoda kuenda.
Asi chii chinoitika ipapo?
Ongororo yehunhu inogona kupa mhinduro kumubvunzo iwoyo. Iyo inogona kuunza pamwechete data kubva kune akati wandei akapatsanurwa masosi zvese zvemukati kune rako bhizinesi uye rekunze maererano nevatengi kusvika. Iyo inogona kukubatsira iwe kuona kuti ndeapi makamuri ane mutengo unodhura mukugadzira iwo huwandu hwekupindura. Kunyanya kukosha, inogona kukubatsira kuti utore vatengi vako vakanakisa mukati meboka iro uye uite pane iro ruzivo nekutora nzira yako yekushambadzira zvinoenderana nekuenderera kumberi.
Unogona sei kushandisa kuongororwa kwekupa zvinobudirira uye kukohwa izvi zvakanaka? Heino yekukurumidza nyaya yekudzidza kuti imwe kambani yakazviita sei:
Iyo Yekushandisa Nyaya Yekupa Attribution Kuongorora
Imwe kambani inogadzira nhare inoshambadzira chikumbiro icho chinoita kuti vashandisi vagadzire, vadzokorore uye vagovane zvinyorwa kubva kune chero chinhu Pakutanga, kambani yakaisa yechitatu-bato analytics zvishandiso zvine prebuilt madhibhodhi kuteedzera basic metric senge kurodha pasi, zuva nezuva / pamwedzi mushandisi kuverenga, nguva yakashandiswa neapp, nhamba yemagwaro akagadzirwa, nezvimwe.
Imwe Saizi Yekuongorora haina Kukodzera Zvese
Sezvo kukura kwekambani kwakaputika uye yavo yekuverenga kuverenga yakakura ikava mamirioni, iyi-saizi-inokodzera-ese maitiro ekuziva haana kukwira. Yechitatu-bato analytics sevhisi yaisakwanisa kubata kusangana kweyechokwadi-nguva data kubva kune akawanda masosi senge server chikuva matanda, webhusaiti traffic uye kushambadzira mishandirapamwe.
Zvakare, iyo kambani yaida kuongorora kupiwa pamatanho akawanda uye makwara ekuvabatsira kusarudza kuti rinotevera rinowedzera rekushambadzira dhora raizoshandiswa nani mukutenga vatengi kutsva. Chiitiko chakajairika chaive ichi: mushandisi akaona kushambadzira kwekambani yeFacebook vachiri parunhare rwavo, ndokuzotsvaga ongororo pamusoro pekambani pafoni yavo, uye pakupedzisira vadzvanya kuisa iyo app kubva kuchiratidziro kushambadzira pahwendefa ravo. Kupa mune ino kesi kunoda kupatsanura chikwereti chekuwana iyo nyowani mutengi pasocial media panhare, yakabhadharwa yekutsvaga / wongororo paPC uye mu-app kuratidza kushambadzira pamahwendefa.
Iyo kambani yaifanirwa kutora zvinhu nhanho kumberi uye kutsvaga kuti ndeipi online yekushambadzira sosi yakavabatsira ivo kuwana avo vanonyanya kukosha vashandisi. Ivo vaida kuona maitiro evashandisi - pamusoro peiyo generic-yeku-isa-chiito - izvo zvaive zvakasarudzika kuapp uye zvakaita kuti mushandisi akoshe kukambani. Mumazuva ayo ekutanga, Facebook yakagadzira nzira yakapusa asi ine simba yekuita izvi: vakaona kuti huwandu hwevanhu mushandisi "shamwari" mukati meiyo yakapihwa mazuva emazuva ekusaina yaive fungidziro huru yekuti mubatanidzwa kana kukosha mushandisi aizoita sei uve mukufamba kwenguva. Pamhepo midhiya uye chechitatu-bato analytics masystem akapofumara kune aya marudzi enguva-akatamiswa, zviito zvakaoma zvinoitika mukati meapp.
Vaida tsika kuongororwa kwekupa kuita basa.
Attribution Kuongorora ndiyo Mhinduro
Kutanga zvakapusa, kambani mukati yakagadzira chinangwa chekutanga: kunyatsoona kuti chero mushandisi akapihwa anowirirana sei nechigadzirwa chavo muchikamu chimwe chete. Kana izvo zvatemwa, vanogona kuramba vachidonhedza pasi mune iyo dhata kugadzira zvikamu zveprofita zvevatengi zvichibva pahunhu hwavo sekubhadhara vashandisi uye mari inoshandiswa mwedzi wega wega. Nekubatanidza nzvimbo mbiri idzi dzedata, kambani yakwanisa kuona yakapihwa vatengi ' kukosha kwehupenyu hwese - metric iyo yakatsanangura kuti ndedzipi mhando dzevatengi dzakabata mari yakawanda kwazvo. Ruzivo irworwo, rwakavatendera kuti vataridze zvakanyanya kune vamwe vashandisi - avo vaibata zvakafanana "hupenyu hwehupenyu" chimiro - kuburikidza neakasarudzika midhiya sarudzo, ine yakanyanya yakatarwa mvumo.
Mhedzisiro yacho? Kungwara, kushandisa ruzivo rwekushambadzira madhora. Kuenderera mberi kukura. Uye tsika yekupa ongororo system munzvimbo inogona kukura uye kuchinjika sezvo kambani ichifambira mberi.
Yakabudirira Attribution Kuongorora
Paunotanga kuita kuongororwa kwekupa, zvakakosha kutanga watsanangura kubudirira mumazwi ako - uye chengeta zviri nyore. Zvibvunze pachako, ndiani wandinofunga semunhu akanaka mutengi? Wobva wabvunza, ndezvipi zvinangwa zvangu nemutengi iyeye? Iwe unogona kusarudza kuwedzera kushandisa mari uye kusimbisa kuvimbika nevatengi vako vanokosha kwazvo. Kana, iwe unogona kusarudza kuona kwaunogona kuwana kwakawanda-akakosha vatengi senge ivo. Izvo zvese zviri kwauri, uye chii chakanakira sangano rako.
Muchidimbu, ongororo yekupa inogona kuve inokurumidza uye yakapusa nzira yekuunza pamwechete data kubva kune akati wandei emukati uye echitatu-bato masosi, uye ita pfungwa yeiyo dhata nenzira iwe yaunonyatso sarudza. Iwe unowana iwo maonero iwe aunofanirwa kutsanangura zvakajeka uye kuzadzisa zvinangwa zvako zvekushambadzira, wobva warodza zano rako kuti uwane iyo yepamusoro ROI inogoneka pane rese rekushambadzira dhora rakashandiswa.
Chii chinonzi Data Warehouse seSevhisi
Isu tichangobva kunyora nezvekuti sei data matekinoroji ari kuwedzera kune vatengesi. Dhairekitori Matura anopa epakati repositi ayo anoyera uye anopa hukuru hukuru mukushambadzira kwako kuedza - kugonesa kugona kuunza muhombe mavhoriyamu evatengi, mutengapamwe, zvemari uye zvekushambadzira data. Nekutora pamhepo, pasiri pamhepo uye nharembozha mune yepakati yekubika dhatabhesi, vashambadzi vanokwanisa kuongorora uye kuwana mhinduro dzavanoda pavanenge vachida. Kuvaka dura rekuchengetera ibasa chairo kukambani yepakati - asi Dhata Warehouse seSevhisi (DWaaS) inogadzirisa nyaya kumakambani.
Nezve BitYota Dhata Warehouse seSevhisi
Iyi posvo yakanyorwa nerubatsiro rwe BitYota. BitYota's Data Warehouse seSevhisi mhinduro inotora musoro kunze kwekuseta uye kugadzirisa imwe dhata chikuva. BitYota inogonesa vatengesi kuti vakurumidze kutora yavo data yekuchengetera kumusoro uye kumhanya, nyore kubatanidza kune iyo gore mupi uye kugadzirisa yako imba yekuchengetera. Iyo tekinoroji inoshandisa SQL pamusoro peJSON tekinoroji kuti ibvunze zviri nyore imba yako yekuchengetera uye inouya neicho chaicho-nguva dhata feeds yeanokurumidza analytics.
Imwe yemainhibitors ekukurumidza analytics iko kudiwa kwekushandura iyo data usati waichengeta mune yako analytics system. Munyika umo kunyorera kunoshanduka nguva dzese, data rinosvika kubva kunzvimbo zhinji, uye nenzira dzakasiyana, zvinoreva kuti makambani anowanzozviwana achishandisa nguva yakawandisa pazvirongwa zvekushandura data kana kumeso akaputsika analytics hurongwa. BitYota inochengetera uye inoongorora iyo data mune yayo yemhando fomati nekudaro ichibvisa kudiwa kwekushanda, kunotora nguva-shanduko yedatha shanduko. Kuita kure nekushandurwa kwedata kunopa vatengi vedu nekukurumidza analytics, yakanyanya kuchinjika, uye yakakwana data kuvimbika. BitYota
Sezvo zvaunoda zvichichinja, unokwanisa kuwedzera kana kubvisa node kubva pasumbu rako kana kushandura magadzirirwo emuchina. Semhinduro inogadziriswa zvizere, BitYota monitors, maneja, zvinopihwa, uye zviyero dhata rako re data, kuti iwe ugone kutarisa pane zvakakosha - kuongorora yako data.
Tags: ongororobasakuongororwa kwekupabityotadhata rinopadeta rekuchengetadura rekuchengetedza sevhisikushambadzira njerechaiyo-nguva dhata inodyisa